ပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ caveman - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်လုပ်နေပါတယ်
caveman international မှရှုပ်ထွေးသောပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်scရာမပန်းပုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမို၍ ခေတ်မီပြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး၊ ယခင်ကအေဂျင်စီအားလုံးထက် ပို၍ ရန်လိုတတ်သည် သင်၏ဖောက်သည်နှင့်မမေ့နိုင်သောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။
ကြိုဆိုပါတယ် Caveman Internationa အေဂျင်စီl လူသိများတဲ့ဖောက်သည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ် Spotify၊ ဝီကီပီးဒီးယားနှင့် MyToys areaရိယာ၌ ပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေး. အဖွဲ့လိုက်တာဝန်ယူမှု ငါတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ဖောက်သည်တွေကိုထောက်ခံတယ် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများအတွက်အဖွဲ့အစည်းများ.
Detlef D နှင့် ODLO အတွက်ဆောင်းရာသီပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေး! မြူးနစ်မှာ
Capital Bra သည်သူ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ်ပြန်လည်စတင်ရန်ဂျာမနီ၏ထင်ရှားသောမြေအောက်ပြောက်ကျားအေဂျင်စီကိုရှာဖွေနေသည်။ ဘာလင်ရှိ Flash mobs များ၊ ရွေ့လျားနေသောကားများမှအလင်းတန်းများနှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်း။ သတင်းစာအမျိုးမျိုးကကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုတင်ပြကြသည်။
NGO တစ်ခုအတွက်လန်ဒန်ရှိ BritAwards တွင်ရုပ်မြင်သံကြားတိုက်ရိုက်လွှင့်နေစဉ်ဗီဒီယိုပြသခြင်း
အစိမ်းရောင်စျေးကွက်။ Caveman International သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ဂျာမနီရှိအနုပညာရှင်များနှင့်ပြောင်းပြန်ရေးခွခြင်းနှင့်လမ်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးတင်သောကြော်ငြာအေဂျင်စီဖြစ်သည်။ မော့စ်အမှတ်တံဆိပ်, မော့စ်နဖူးစည်းစာတန်းများ, မော့စ်ပန်းပု, မော့စ်ဆိုင်းဘုတ်များ, အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်! မော့စ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပြီးသင့်ရဲ့တရားမျှတမှုမှာစိမ်းနေလိမ့်မယ်။
၂၀၁၁ သြဂုတ် ၂၀၁၁ Badenova AG အတွက်စီမံကိန်း - ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
ပြောက်ကျားစျေးကွက် - အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူအများဆုံးရောက်ရှိရန်နှင့်ဖောက်သည်အာရုံစိုက်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုလုံခြုံ၏အနုပညာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SnowOnDemand အထူးအမြှုပ်နှင့်တကွ, အာရုံစူးစိုက်သင့်ရဲ့ကြော်ငြာအပေါ်ကျရောက်ပါတယ်။ non-အရည်ပျော်ဆီးနှင်းအာရုံကိုကြိုးနဲ့တုတ်မှစုံလင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပြောက်ကျားပြောက်ကျားဆိုင်ရာကြော်ငြာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကြံဥာဏ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၀ မ်းသာပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောက်ကျားစျေးကွက်ကြော်ငြာအေဂျင်စီကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုပါ။
အရောင်းမွန် - Sat 10 a.m. - 20 p.m ။ : +49 2131 4058-629
pixel ကူညီ အာဖရိကမှာရှင်းလင်းချက်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူး
အမြဲတမ်း currywurst ။ အမြဲတမ်းပိုစတာကြော်ငြာစာအုပ်။ အမြဲတမ်းအတူတူကြည့်ပါ ...
ကျနော်တို့ Caveman တစ်ပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီအဖြစ်သူအမြော်အမြင်။
နောက်ကျောကသင်၏ထုတ်ကုန်အတွက်နောက်ထပ်က Galaxy မှတဆင့်တစ်ဦး wormhole မှတဆင့်စဉ်းစားပါနှင့်အစဉ်အမြဲတစ်ခါတစ်ရံကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်မှာငါတို့ဖန်တီးမှုဘဝအားကိုး။
Caveman ပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောအထူးကုအေဂျင်စီများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မလုပ်
ရုပ်ဖျက်ပြောက်ကျားများနှင့် Trojan ဟာစျေးကွက်၏ဧရိယာ၌ကြီးမားသောကွန်ယက်ကိုအေဂျင်စီများအဘို့လည်းငါတို့ကနိုင်ငံရေးစည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုအတွက်Aufrägeယူဆ
ဂျေး Conrad Levinson, ပြောက်ကျားများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပြီးသား 80er-နှစ်အတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် Caveman အင်တာနေရှင်နယ်ကဤအရေးကြီးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမှကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်ဤသို့လုပ်ဆောင် inspierierende ကြော်ငြာစီမံကိန်းများအတွက်အဘို့သင့်ဖောက်သည်များအပေါငျးတို့သအသိတရားအယူခံ။
ပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင့်ရဲ့ cerebrum များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ CPM အဖြစ်ကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်းများ, Classical စံ, CPC လျစ်လျူရှုခံရဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အောင်မြင်ရန်သင့်ပါတယ်။
ပြောက်ကျားစျေးကွက်သင်သည်သင်၏ယှဉ်ပြိုင် attakieren ကိုညွှန်ကြားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပြောက်ကျားများ၏အမျိုးမျိုးသောလက် tools တွေကိုအဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်စျေးကွက်နှင့်အတူလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
FÜHR Pledge ဈေးကွက်
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖြစ်များစွာသောအဆွေခင်ပွန်းများနှင့်အသိအကျွမ်းပြောပြရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရောက်လာရန်ပစ်မှတ်အုပ်စုတွင်ကြော်ငြာ crowbar အပြုသဘောဆောင်မယ့်အစားရသင့်ပါတယ်။
ပြောက်ကျား Marketing ကိုတိုက်ရိုက်သင်သည်သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုမှအာကာသတည်းခိုဘယ်မှာဖြေရှင်းရန်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ရေကူးကန်ထဲမှာတစ်ဦးဖျော်ဖြေပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ရှိမရှိ။
ပြောက်ကျားစျေးကွက်ကလူ emotionalizes နှင့်သင့်အမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်ဘို့အာရုံကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
ပံ့ပိုးပေးသောအေဂျင်စီများနှင့်သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် Caveman International နှင့် ၂၄/၇ ဆက်သွယ်မှုရှိပြီးလက်ရှိပြtoနာများကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Superbowl အတွက်တွစ်တာကြော်ငြာလား၊ သို့မဟုတ်အရေးကြီးသောတီဗီအဖြစ်အပျက်များအတွက်မီဒီယာဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည်သင်၏ကြော်ငြာခြင်းတည်ရှိမှုကိုဂရုစိုက်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထင်ရှားသောကွန်ယက်အေဂျင်စီများနှင့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစုစုကိုကမ်းလှမ်းသည်:
ဥရောပတိုက်တွင်∴ Ambient မီဒီယာစျေးကွက်
∴ Analog စဒစ်ဂျစ်တယ်ကြီးမားသော-screen ကို projector ကိုအသုံးပြုခြင်း
∴ Viral စျေးကွက်
houses အိမ်များနှင့်ရွေ့လျားနေသောအရာဝတ္ထုများကို 3D မြေပုံဆွဲခြင်း
vertising မိုးလေ ၀ သနှင့်ပြုပြင်ရန်အဝတ်လျှော် Reverse Graffiti
Flyvertising နှင့်လူမျိုး၏အုပ်စုများကျော်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ overflights အခြားပျံအရာဝတ္ထု∴
∴မြေဖြူတွေသုံးပြီးရေးခွသို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်ဟာဖယောင်းစက္ကူ Template ကို
AG ပြင်ပကြော်ငြာများနှင့်ပိုစတာများအတွက် Wall AG နှင့် Stroeer ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကန်ထရိုက်များမှတဆင့်
ပါတီအဖွဲ့အစည်းနှင့် Flyer ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ∴တက္ကသိုလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
∴ Flash လူအုပ်ကြီးများနှင့်အများပြည်သူရှေ့တွင်ဖျော်ဖြေရေးဖျော်ဖြေပွဲများ
Caveman အင်တာနေရှင်နယ် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုကိုအောက်တွင်-The-line ကိုအထူးကုအေဂျင်စီကြောင်းဖြစ်ထွက်လှည့် ဒုတိယမှတ်တိုင် အပေါ် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ အထူးပြုသည်။ core အရည်အချင်းကို ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်ပါတယ် ပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေး နှင့် ambient စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ, ပရိုမိုးရှင်းများ, ဖြစ်ရပ်များ, မက်လုံးများနှင့်နမူနာ။
အလင်းအနုပညာ နှင့်များ၏ပူးတှဲ ဖြစ်ရပ်များ အပြန်အလှန်အလင်းတပ်ဆင်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကြီးမြတ်ကိလေသာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုဒေသတွင် စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှု ပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်အဆန်းကိုချိုးဖောက်နေကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဥပမာ - ရွေးကောက်ပွဲများပိုမိုနီးကပ်လေလေ၊ သိသာထင်ရှားသောအံ့သြစရာလုပ်ရပ်များဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကြော်ငြာရန် supersaturated မဲဆန္ဒရှင် အောင်မြင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များရရှိရန်, တိုကျရိုကျဆက်သွယ်ရေးပြပွဲနှင့်အပေါ်ယံ application ကိုတစ်ချိန်ကပညာ စဉ်းစားဟန်နှင့်အံ့သြစရာပြောက်ကျားနည်းဗျူဟာများ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအရည်အချင်းကိုအဖြစ် - အနုပညာ၏ပြည်နယ်များမှာ ပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကုအေဂျင်စီ
ပြောက်ကျားစျေးကွက် Advertising ကြော်ငြာအေဂျင်စီ
ပုံမှန်မဟုတ်သောလူဦး ပုံမှန်မဟုတ်သောအမြင်များသည်။ မတူညီတဲ့လူတွေ ယင်းကိုအသုံးပြုဖို့ အပြည့်အဝရောင်စဉ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးရှိပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုတဦးတည်းအစိမ်းရောင်ကရှည်လျားသေးအခြားဖြစ်ပါသည်, ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုတဦးတည်းတဦးတည်း looker သာဟနေခြင်းမှအခြားသို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ပရမ်းပတာတဦးတည်း, တခြားသူတွေရဲ့ပါရမီကပြောပါတယ်။ 40 ဖန်တီးမှုကြော်ငြာစိတ်ထဲတွင် မျက်စိကိုတိရိစ္ဆာန်သည်လူမှာကြီးပြင်းကြောင်းအာမခံပါသည်။
မဆိုးလိုက်လျောပေမယ့် Hard-အနိုင်ရသဘောတရားများနှင့် ausdiskutierte ဖြေရှင်းနည်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များကြောင်းသေချာစေရန် စိတ်ကူးဉာဏ် နှင့် အိပ်မက် ပရိသတ်ကိုမှအယူခံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ရန်ဖြစ်ပါသည် ထူးခြားမှု, ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကျနော်တို့ရဲ့အလုပ်မမြင်စဖူးသောသူမည်သည်, ကအကြောင်းပြောပြချင်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့နေသမျှကာလပတ်လုံးသောကြောင့်အတွေးအခေါ်များအာရုံစိုက် အခြေခံသည်အထိပေမယ့်မမြင်ရတဲ့ ထင်ရှားသော အလင်းထံသို့မရောက်ရ။
အဆိုပါကတည်းက 2000 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါစစ် တိုက်. ကျွမ်းကျင်သူများက အ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြော်ငြာအေဂျင်စီ ခေတ်သစ်ကာလ၏ခေတ်သစ်နည်းလမ်းများနှင့်အတူ Caveman နှင့်စီမံကိန်းများကိုပျက်ကွက် - အဘို့ ကျော်ကြားတဲ့ဖောက်သည် နယ်သာလန်, မော်ရိုကိုနှင့်ဂျာမနီ-ဝေးရှေ့ဆက်ပါ။
Lenor၊ Procter & Gamblet အတွက်ကြော်ငြာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ
© 2020	caveman international မှရှုပ်ထွေးသောပြောက်ကျားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်scရာမပန်းပုများ
WordPress ကိုအားဖြင့် Powered
အထက်သို့ ↑	အမြင့် ↑